Xisaabta Xisaabta SEO WordPress Plugin waa Cajiib!
Sabtida, Juun 6, 2020 Talaado, Agoosto 24, 2021 Douglas Karr
Xisaabta Xisaabta SEO Plugin ee loogu talagalay WordPress waa shey fudud oo fududeynta mashiinka raadinta ee WordPress oo ay ku jiraan khariidadaha bogga, goos gooska hodanka ah, falanqaynta nuxurka, iyo dib u habeynta.
Bogagga Mobilada ee la dedejiyay waa waajib, laakiin ha iloobin falanqaynta!
Khamiista, Diseembar 28, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Bishan la soo dhaafay waxaan la shaqeynayay macmiil la arkay hoos u dhac muuqda oo ku yimid taraafikada raadinta dabiiciga sanadkii la soo dhaafay. Waxaan wax ka bedelnay arrimo aad u yar oo ku saabsan barta saamaynta ku yeelan karta darajooyinka; si kastaba ha noqotee, waxaa iga maqnaa hal qodob oo muhiim ah oo ku saabsan dib u eegista falanqayntooda - Accelerated Mobile Pages (AMP). Waa maxay AMP? Iyada oo bogagga internetka ee jawaabta noqda kuwa caadiga ah, cabbirka iyo xawaaraha goobaha mobilada si weyn ayaa loo saameeyaa, badiyaa waa la yareeyaa goobaha
Joost de Valk ayaa sameeyay. Kali kali keli ah, kumbuyuutarradiisa WordPress ayaa udub dhexaad u ah dadaal kasta oo lagu hagaajinayo boggaaga WordPress ee mashiinnada raadinta. Waxaan u adeegsaday qalab kale si aan u maareeyo edbinta robots.txt, htaccess, dhisida khariidadaha bogga, awood u siinta qoraaga iyo microdata bulshada… wayna xasilloonaayeen, lama soconin isbeddelada algorithm, si fududna uma fulin. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa in WordPress ay tahay inay si fudud u iibsato Yoast oo ay si toos ah ugu darto dhammaan waxyaabihii cajiibka ahaa ee Joost
In yar ka dib, waxaan wadaagnay sida aan ugu dajinnay Qoraa degelkeenna. Qoraalku wuxuu noqday istiraatiijiyad muhiim ah, kordhinta qiimaha gujinaya ee natiijooyinka mashiinka raadinta ee leh taajirka hodanka ah, iyo kordhinta suurtagalnimada in bartaada WordPress ay sifiican uheli doonto. Waxaa jira horumar aad u yar oo lagama maarmaan u ah maanta si loo suurtageliyo qoraaga mahadnaqa qaar ka mid ah qorayaasha waaweyn ee wax ka qora halkaas sida Joost De Valk. Fure u ah habkan awood u siinta qoraa waa taas